सम्झनामा गणतन्त्रका महानायक : राजतन्त्रविरोधी आन्दोलनको अगुवा
निशान न्युज चैत्र ७, 2075
काठमााडौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका महानायक भनिएका स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नवौँ स्मृति दिवस विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ । गिरिजाप्रसाद कोइराला, नेपाली राजनीतिमा सधैं चर्चामा आउने नेता हुन् । नेपाली राजनीतिमा संयोजनकारी भूमिका खेलेर माओवादी द्वन्द्वलाई शान्ति प्रक्रिया हुँदै देशलाई...
सञ्चारमन्त्रीको प्रश्न : नेपालमा जस्ल...
चैत्र ३, 2075 सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न तयार गरेको विधेयक अहिले संसदमा पुगेको छ । धेरैले यो विधेयकको बारेमा निकै आलोचना गरेको सुनिएको छ । हामीले यसलाई निकै नै साधारण व्यवस्थाको रुपमा अघि बढाएका छौँ । यो व्यापारसँग, सुरक्ष...
विजयको यात्रा : कुक हेल्फरदेखि सगरमाथ...
चैत्र २, 2075 काठमाडौं । विजय घिमिरे विश्वकर्मा, यो नाम सुनेकै हो । सोलुखुम्बुको दुधकुण्ड नगरपालिका –७ भित्ताखर्चमा जन्मिएका विजय निम्न वर्गीय परिवारका सदस्य हुन् । उनका परिवारका सबैले ८ सम्म मात्रै पढेका छन् । त्योभन्दा अघि कसैले पढ्न ...
कोमल वली भन्छिन्, म पनि अनलर्निङको प्...
फाल्गुन २४, 2075 मेरा प्रिय समर्थक, मेरा अग्रज र मलाई सधैं हौसला दिनु हुने तपाईंहरु सबैलाई नमस्कार । म विश्वस्त छु, अहिले राष्ट्रिय सभा सदस्यको हैसियतले मैले मेरै समाजका समस्याहरुलाई त्यहाँ आवाज उठाउने प्रयास गरिरहेको कुरा तपाईंहरुले बुझ्...
सामाजिक सञ्जालमा फैलिन थाल्यो ठगी धन्...
फाल्गुन २२, 2075 प्युठान । ठगीको पनि अनेक उपाय हुन्छन् । त्यसका पनि पछिल्ला दिनमा सामाजिक सञ्जालमार्फत अनेकौं प्रलोभन देखाएर ठगी हुने गरेका छन् । सचेतना नअपनाए ठगिन पनि सक्छ । सचेतना अपनाउँदा ठगी हुनबाट जोगिन पनि सकिन्छ । यसरी नै लाखौंको ...
शोकमा डुब्यो पोखरा, अधिकारी निवासमा आ...
फाल्गुन १५, 2075 पोखरा । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्रप्रसाद अधिकारीसहित सवार एयर डाइनेष्टीको हेलिकप्टर दुर्घटानाग्रस्त भएको खबरसँगै अधिकारीका आफन्तजन एवं शुभेच्छुक पोखरास्थित उनको निवासमा पुगेका छन् । बुधबार दिउँसो १...
व्यवसायीसँग ‘लाइन मिलाउन’ नजान्ने मल्...
फाल्गुन ३, 2075 काठमाडौं । नागरिकको आधा सुरक्षा त प्रहरीको राम्रो व्यवहार र आचरणले नै हुन्छ । त्यही भएर पनि प्रहरीमा मुस्कान सहितको सेवा भन्ने गरिएको छ । प्रहरी संगठन र एउटा प्रहरीसँग राम्रो व्यवहार र आचरण भयो भने सबैको सहयोग हुन्छ भन्ने...
मेहेनतको फल : स्वरोजगार, रोजगार र सम्...
माघ २९, 2075 काठमाडौं । सीपले मानिसलाई धनी बनाउँछ । जोसँग सीप छ, उ नै सबैभन्दा धनी व्यक्ति पनि हो । सीप बिनाको मानिस जिन्दगीमा सधैं अधूरो र अपूरो रहन्छ । सीपमा धनी हुन् कालीगढ । कालीगढहरुले न राज्यलाई केही दिए न केही लिए । कालीगढहरुला...
संघर्षले यसरी मोडियो विष्णुमायाको जीव...
माघ २८, 2075 काठमाडौं । ‘वी डिसाइडेट टु डिक्लियर अवार्ड विष्णुमाया डे इन सेप्टेम्बर २७ ।’ लुइस भिल्ले स्टेटका एकजना सरकारी प्रतिनिधिले ड्यासबाट यो शब्द उच्चारण गर्दैगर्दा डा. विष्णुमायाका आँखामा खुसीका आँशुहरु बगिरहे । त्यो क्षण सम्झिँ...
सिमेन्ट, सुपारी र होटल यसरी भित्रिन्छ...
माघ ३, 2075 काठमाडौं । नेपालमा उदाउँदा व्यावसायिक घरानाहरूले सिमेन्ट उद्योग, सुपारी–गुट्खाव्यापार र सेवाक्षेत्र होटल सञ्चालन गर्न अवैध आर्जन राख्न, लुकाउन मिल्ने मुलुकबाट कसरी ल्याइरहेका छन् लगानी ? ‘ट्याक्स हेवन’ को नेपाल नाता । नेप...
अजेयराज सुमार्गीदेखि चन्द्र ढकालसमेतक...
माघ २, 2075 ‘विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने’ कानूनी व्यवस्था विपरीत ५५ नेपालीको विभिन्न देशमा लगानी रहेको भेटिएको छ । यस्तो लगानी गर्नेहरूमा प्राध्यापक, डाक्टर, पूर्व सांसद्, नेता र समाजमा नामै नसुनिएका व्यक्तिहरू समेत छन् । ५४ ...
स्विस बैंक : शंकास्पद धनको के छ नेपा...
माघ २, 2075 काठमाडौं । २७ माघ २०७१ मा नेपालमा सनसनी भएको समाचार हो– ‘स्विस बैंकमा नेपालीको साढे ५ अर्ब’ रुपैयाँ । खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र ‘दी इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नालिष्टस्’ (आईसीआईजे) ले त्यसब...
मैले आफ्नो घर मिलाउने प्रयासमा के के ...
पुष २०, 2075 नचाहदाँ नचाहदैँ पनि आफ्नो ब्यक्तिगत कुरा गर्नु पर्यो । मलाई पाईलै पिच्छे लडाउन, देशबाटै निकाला गर्ने लगायतका प्रयास बिफल भएपछि अब मेरो निजि जिवनमा प्रवेश गर्ने प्रयास हुँदै रहेछ । लामो समयसम्म बैचारिक लडाइँ लड्दै अलग अलग ब...
यस्ता छन् कञ्चनपुर घटनामा बिष्लेषण हु...
पुष २०, 2075 कञ्चनपुर घटनापछि अनेक प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । कतिपय प्रश्न जायज पनि छन् र कतिपय हल्लामा आधारित रहेर उठेका पनि छन् । सबै प्रश्नका उत्तर हुन्छन् भन्ने पनि छैन । तर, अहिले उत्तर नै नआउने प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । जसले घटनालाई...
नयाँ प्रविधिको विकास : नेपालमै पहिलोप...
पुष १६, 2075 काठमाडौं । के तपाईले बाटोमा हिड्दा टेकिने ब्लकले पानी सोच्छ भनेर कहिले कल्पना गर्नुभएको छ ? वा सडक पेटीमा बिच्छ्याइएका टायलका ब्लकले कहिले पनि पानी सोच्दैन भन्ने सोच्नुभएको छ ? उकहदसम्म तपाईको सोचाई ठीक पनि हुन सक्छ । तर,...
← अघिल्लो 1234567 8910 11 … 38 39 पछिल्लो →